Maxay ku jawaabtay Sunny Leone markii la yiri kala dooro HAL Crore iyo HAL Shumis – gabadhaani ma gambato? – Filimside.net
Maxay ku jawaabtay Sunny Leone markii la yiri kala dooro HAL Crore iyo HAL Shumis – gabadhaani ma gambato?
January 13, 2018 Ali Aadan
Sunny Leone waa mid ka mid ah atariishooyinka haatan loogu jecel yahay dalka India, sababtoo ah gabadhaani waxay nadiifisay sumcaddeeda iyadoo sameyn jirtay aflaanta galmada ah ayeyna haatan noqotay qof sharaf ku leh bulshada dhexdeeda.
Waxaa ugu wacan tayada Sunny Leone, taasoo haatan noqoneysa xiddig aan indhaha laga qarsan karin, aflaanta ay kasoo muuqato ayaana lagu ammaanay.
Sunny ayaa wareysi lala yeeshtay waxana la weydiyay suaalo dhowr ah Mid kamid ah su’aalihii ugu yaabka badnaa ee la weydiiyey Sunny, taasoo ay dadka oo dhan la yaabeen ayaana waxay aheyd: “Midkee ayaad doorbidi laheyd inaad isiiso haddii aad awoodo HAL Crore oo lacag ah ama hal shumis (Rs One crore or One Kiss).”
Sunny ayaana si aan gambad laheyn uga jawaabtay su’aashaas, iyadoo tiri: “Waa su’aal nacasnimo ah, sidaas darteed waqti badan isagama lumin doono. Adigana sidaas ayey kugu dhaaftay fursaddii aad su’aasha igu weydiin laheyd”.
Sunny oo sharraxaad sii bixineysay ayaa daaha ka qaaday in shaqsi ahaan ay doorbideyso lammaane daacad ah oo nolosha la wadaaga bedelkii ay lacag eegan laheyd, waxayna sheegtay inay lacagi markii hore lumisay, taasoo dhaawac u geysatay sumcaddeeda.
Waxaa Aqrisay 1,600